Wasiir Ku Xigeenkii Labaad Oo Qaadacay Xilka Looga Magacaabay Golaha Wasiirada Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: C/kaafi Macallin Xasan oo ka mid ahaa xubinihii Raysul wasaare Cabdi Weli Sheekh Axmed xalay u magacaabay wasiirka ku xigeenada ayaa maanta ku dhawaaqay inuusan qaadaneyn xilkaas, islamarkaana uu iska casilay.
C/kaafi Macallin Xasan oo loo magacaabay wasiir ku xigeenka Tamarta iyo Biyaha oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in kadib markii uu la tashaday xildhibaanada iyo odayaasah beeshiisa uu goostay inuusan aqbalin xilkaas, oo uu xusay inuusan u qaadmin beeshiisa sida uu yiri.
Wuxuu sheegay C/kaafi in beeshiisu sanadkaan ka sugeysay dowladda Soomaaliya iney ka hesho xaqii ay ku laheyd sida uu yiri, sidaas darteedna cadka la siiyey uusan u dhigmin wixii ay ay sugayeen.
Waa wasiirki ku xigeenkii 2-aad ee maanta ku dhawaaqay inuusan qaadaneyn xilka loo magacaabay, waxaana saaka sidan oo kale xilkii loo magacaabay ka biyo diiday gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamud Axmed Nuur “Tarsan” oo loo magacaabay wasiirka ku xigeenka Ciyaaraha & Dhalinyrada.
Waa caqabadii ugu horreysay ee soo wajahaday xukuumadda cusub ee Raysul Wasaare C/weli Sheekh Axmed oo xalay lagu dhaaqay.